60 sanno kadib howl-galkii nabad ilaalinta ee ciidamada Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dag Hammarskjöld oo ahaa muwaadin iswiidhish ah ayaa xoghaya guud ee Qaramaada Midoobey ahaa waagii uu socday dagaalkii gacanka Suez sawir: Credit: TT Montage: Sveriges Radio
60 sanno kadib howl-galkii nabad ilaalinta ee ciidamada Sweden
"Toban sanno baa nabadda haynay"
La daabacay torsdag 24 november 2016 kl 15.31
Lixdan sannadood ayaa hadda ka soo wareegtay goortii ciidamo nabad ilaalin ah oo ka socday Sweden ey howl-gal ka sameeyaan caalamka.
Sannadka waxuu ahaa 1956. Olle Brennius oo waagaasi 24-jir ahaa ayaa gegida Bromma ka raacay dayuuraddii lagu daad-gureeyey ciidamadii nabad ilaalinta Sweden ee ku wajahnayd dalka Masar. Howl-galka loo diray waxuu ahaa in ay kala dhex gala dagaal waagaasi u dhexeeyay dawladda Israa’iil, Fransiiska iyo Ingriiska oo dhinac ah iyo waddanka Carabta ee Masar.
- Waligey horey ma u raacin diyaarad ciidan oo sidaas u weyn. Waxay aheyd diyaarad ay leeyahiin ciidamada cirka Mareykanka, ayuu yeri Olle Brennius.
- Markaan gaarnay Port Said waxaa naloo sii gudbiyey lama-deegaanka siinaay si aan dhul ugala wareegno ciidamada Israel. Labo bilood ayey nagu qaadatay in aan gaarno marinka Gaza, halkas oo howl-sheena noqotay ilaalinta xadka Israel Masar iyo Falastiin. Shan bilood ayaan howl-shas heyney.
Toban sanno ayaa ciidamada nabad ilaalinta qaramada Midoobey ka socda oo uu ka tirsanaa Olle Brennius ku guleysteen in hayaan nabadda. Balse kadib waxaa qarxay dagaalkii lixda maalmood ee u dhaxeeyey waddamada carabta iyo Israel.
– Ciidamada QM ee nabad ilaaliyasha waxaa ku qasab ku noqotay in ay ka soo baxaan Masar. Mar haddii dagaalka aysan joojin karin howl kala oo ay meesha ka hayeen ma jirin, ayuu yeri Olla Brennius.